ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတချို့ မနက်ဖြန် ရန်ကုန်ရောက်မည်	မြန်မာဌာန
ကနေ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2012-08-31
"အခုဗမာပြည်မှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးကို အခြေခံကျကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့၊ နောက်တစ်ခုက အမျိုးသား ကျွန်တော်တို့ reconciliation ပေါ့လေ၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတွေလုပ်ဖို့၊ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးဆုံး အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရေး ကိစ္စတွေကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် သွားတာ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်"
ဒါ့အပြင် ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အဖြစ်မှန်ပေါ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးမိုးသီးဇွန်က ပြောပါတယ်။
"အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ အဓိကပေါ့လေ၊ ကိုနိုင်အောင်လည်း အခုအထဲကို ရောက်နေတော့ သူကနေပြီးတော့ တာဝန်ခံပြီးတော့ ဖြေရှင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သိရပါတယ်။ အဲတော့ သူတို့ရဲ့ ဖြေရှင်းမှုတွေအတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ က နောက်အထဲက ကာယကံရှင်တွေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့မှာပါ။ တွေ့ပြီးတော့ အခြေအနေ အဖြစ်မှန်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အထိကို အမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်စေရပါမယ်"
ဦးမိုးသီးဇွန်နဲ့အဖွဲ့ကို မြန်မာသံရုံးကနေ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ၂၈ ရက် ထုတ်ပေးထားပေမယ့် နောက်ထပ် ဗီဇာထပ်တိုးလို့ ရမယ်ဆိုရင် ဆက်ပြီးနေဖို့ အစီစဉ်ရှိကြောင်း ဦးမိုးသီးဇွန်က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကန့်အသတ်တွေ၊ လက်မှတ် ရေးထိုးရတာမျိုး မရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြည်တွင်းကို ပြန်လာတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Sep 02, 2012 02:01 AM
Dear Mr. Moe Thee Zun (ဦးမိုးသီးဇွန်), reconciliation is good. But there should be an honest attempt at the reconciliation of differences before resorting to combat. You should not follower of Bengali Rohingya. Sep 01, 2012 05:47 AM